> Resource > Video > Sida loo dar Picture in Video
Dad badan ayaa jecel yihiin in ay ku darto sawiro ama logo u gaar ah si ay u files video laakiin ma yaqaanaan sida. Dhab ahaantii, waxa kaliya socod ee park haddii aad isticmaasho qaar ka mid ah qalabka video edition. Halkan waxaad ku baran doontaa sida in aad ku darto sawir si video la qaylqaylin awood video tafatirka Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Waxaad marka hore kala soo bixi kartaa iyo Raac tallaabooyinka hoose.
1 Import MP3 iyo Images Barnaamijka this
Guji "Import" ka dibna dooro videos bartilmaameedka ka folder file ama si toos ah jiidi oo iyaga hoos u saxaarad shayga. Markaasuu iyaga u Timeline u dhigma. Ogow haddii aad meeshaa oo dhan files video inay Jadwalka isku mid ah, ay la muuqan wada biireen doonaa.
2 dar Picture in Your Videos
Ka dib markii in, dooro sawirka aad rabto in lagu daro in aad video oo jiidin Timeline PIP ah. Habee xajmiga iyo meel si ay u haboon in aad video. Markaas si fudud u dhaqaaqo meesha la doonayo ee video ama jiidi jir markii si ay u haboon in aad dhererka video.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa saamaynta dheeraad ah si aad u sawir. Si tan loo sameeyo, xaq guji iyo dooran "Advanced Edit". In daaqadaha pop-up, waxaad ku dari kartaa mooshin, maaskaro, sameeyaan qayb ka mid ah clip ah oo hufan, ku dar xadka, hooskii, iwm Tusaale ahaan, waxa aad sameyn kartaa in aad sawirka ka badan wax yar ka hufan haddii midabka asalka ay u muuqataa mid aad u cad in video ah clip. Si tan loo sameeyo, waxaad tagtaan dalka "Saamaynta" tab. Halkan, waxaad samayn kartaa qeyb ka mid ah clip ah oo hufan, ku dar xadka, hooskii, iwm si ay u kaamil ah.
Talo: Waxaad ku dari kartaa sawirro badan in video ah. Maxaad samayn lahayd waa u dhig si PIP Timeline kala duwan iyo hagaajinta goobaha ay sida kor ku xusan.
3 dhoofinta File
Haddii lagu qanco, riix batoonka "Abuur". Halkan waxaad ka heli doontaa qaab:
Save sida qaabab kala duwan: doortaan qaab dhoofinta iyo badbaadin aad disk deegaanka
Save oo ku haboon qalabka kala duwan: qaado model ah qalab gaar ah iyo badbaadin qaabka socon
Geliyaan si ay u YouTube: warbixin xisaabtaada buuxiyo si toos ah wadaagno video ka app this
Guba si DVD: geliso DVD disk iyo aad u hesho a DVD video tayo sare leh daqiiqo
Daawo video tutorial si aad u barato faahfaahin dheeraad ah: